Wararka Maanta: Sabti, May 18, 2013-Munaasabado iska soo Horjeeda oo ka dhacay Gobolka Sool iyo Deegaanka Cayn ee Degmada Buuhoodle
Maamulka Somaliland ee gobolka Sool oo illaa shalay gellinkii dambe ku mashquulsanaa sidii ay ammaanka Laascaanood gacanta ugu hayn lahaayeen ayaa munaasabad ay ku xusayaan maalinta ay sheegeen inay ka go'een Soomaaliya inteeda kale ku qabtay xarunta gobolka Sool.
Masuuliyiin kala duwan oo ka mid yahay wasiirka hawlaha guud iyo guriyeynta Somaliland, Axmed Cabdi Xaabsade ayaa kula hadlay dadkii halkaasi isugu yimid, iyagoo ka hadlay muhiimadda ay 18-ka May u leedahay maamulkooda.
Waddooyinka magaalada Laascaanood ayaa ciidammo kala duwan la dhoobay intii ay xafladaas socotay taasoo lagu xakamaynayay isku soo bax ay sameeyaan bulshada deegaanka oo iyaguna maalmahan u diyaar-garoobayay munaasabadda 18-ka May oo sanadkii 2005-tii uu duqii degmada Laascaanood, Dr. C/rashiid Barkhadle u asteeyay inay noqoto maalinta nadaafadda degmada.
Dugsiya hoose iyo kuwa dhexe ee magaalada Laascaanood ayaa la dhiganayay maanta taasoo qayb ka dhigtay in hoos u dhac uu ku yimaado cabsidii laga qabay inay dhallinyaradu billaabaan rabshado ka dhan ah maamulka Somaliland.
Shacabka magaalada Laascaanood ayaa weli wada sidii ay u billaabi lahaayeen xuska maalinta nadaafadda iyagoo meelaha qaarkood lagu arkayo dadkii howshaas qaban lahaa.
Dhinaca kale, magaalooyinka Buuhoodle, Taleex, Xudun, Boocame iyo degeaannada hoos yimaada ayaa wararku sheegayaan in saaka laga billaabay ololihii nadaafadeed ee ugu balaarnaa abid.
Jidadka magaalada Buuhoodle oo ah magaalada ugu dadka badan deegaanada uu ka taliyo maamulka Khaatumo ayaa waxaa camiray dadweyne iyo gaadiidka dadweynaha oo daad-gureynaya qashin laga ururiyay magaalada.
Si kastaba ha ahaatee, munaasabadahan isku lidka ah ayaa sannad kasta sababa iska-horimaadyo khasaare geysan oo intooda badan ka dhaca maagaalada Laascaanood; waxaana la eegayaa saacadaha ka haray iyo sida ay ku dambayso.